Boqolsoon - Wikipedia
Shiikh Maxamed Axmed Rooble (Boqolsoon) waxa uu ku dhashay Gobolka Galgaduud ee Dalka Soomaaliya.
Imaamku Allaah ha unaxariistee, wuxuu kaddib usoo wareegay magaalada Muqdisho, halkaasoo uu kasiiwatay waxbarashadiisii iyo daraasadiisii diiniga ahayd, isagoo aad ugu dheeraaday aqoonta culuumta Axaadiista rasuulka(NNKH), wuxuu aad dhinac walba wax ka ogaaday qaybaha axaadiista iyo funuuntiisa iyo waxa ay cilmigaan culumadu kutubtooda uga hadleen, Sidoo kale wuxuu Imaamku daraaseeyey ama bartay Cilmiga tafsiirka qur'aanka, qaybaha af-carabiga iyo Cilmiga fiqiga.
Imaam Boqolsoon(Allaah ha u naxariistee), isagoo da'yar, isla markaasna kujira xilligiisii ardaynimo ayuu haddana bilaabay inuu uguntado faafinta iyo ugargaarka diinta Islaamka, wuxuu si gaar ah u dareemay in dadkiisa soomaaliyeed u oomanyihiin aqoonta diintooda muqaddaska ah, kadib imaamku wuxuu xoog naf iyo maalba leh saaray inuu casharro kaladuwan ka bilaabo daafaha magaalada muqdisho(guryo iyo Masaajidba), casharradaas oo ubadnaa barashada Axaadiista Rasuulka(NNKH) iyo muxaadarooyin, taasoo ay natiijadeedu noqotay in mujtamac weeyn oo Soomaalida kamid ihi ay qaabilaan soona dhaweeyaan diintooda, isla markaasna ay toosnaadaan.
BEESHIISA IYO KORITAANKIISA
waxa uu ku dhashtay magaalada guruceel allaha u naxariistee imaamka waxa uu ahaa nin ka dhashtay beesha habargidir/ceer imaamka waxa uu quraanka ku dhameeyay isla magaaladaas guruceel kadibna wuxuu u doontay cilmiga caasimada dalka oo markaas culumo badan ku nooleed.
Imaam Boqolsoon Allaah ha unaxariistee, anigoo og in dadka intiisa badani yaqaannaan magiciisa ama ay dhagaysteen cajaladihiisa, haddana waxaan aamminsanahay inuu yahay daaciga ugu cajaladaha badan isla markaasna ay soomaalidu ugu jeceshahay dhagaysigiisa. Imaamku wuxuu aad caan ugu ahaa muxaadarooyinka kahadlaya mujtamaca iyo wanaajintiisa, qoyska, deriska, dawladda, caqiidada, cibaadada IWM.
Dadaalkaas kaddib, Imaamku wuxuu soo saaray arday aad ufara-badan kuwaasoo maanta kukala nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba, ardaydaas oo isugu jirta kuwo imaamka si toos ah cilmiga uga qaatay iyo kuwo cajaladihiisu gaareen laakiin aan Imaamka lakulmin. Qaybtaan intaynaan kabixin waxaa xusid mudan doowrkii shariifka ahaa ee uu Imaamku ka qaatay kobcinta wacyiga diiniga ah ee Soomaalidii ku dhaqnayd carriga Kiinya oo uu Imaamku kusugnaa biloowgii siddeetameeyadii ilaa biloowgii sagaashankii, halkaasoo uu sidii caadada u ahayd uu dacwo xoog leh ka sameeyey magaalada Nairobi.
SIFAADKIISII: Imaam Boqolsoon Allaah ha unaxariistee, oo aan Ilaah dartiis walaalo ku ahayn, anagoo yar-yarna aan is barannay, waxaan aad uga xusuustaa sifooyinkiisii: Wuxuu ahaa nin aan dherayn gaabnayna, midabkiisuna uu furan yahay oo aan madoobayn aadna ucasayn, laakiin quruxsan, timo jilcsan- laakiin aan daadsanayn ayuu lahaa oo isku buuxa, wuxuu ahaa Imaamku nin bashaash ah oo usheekeeya saaxiibadiis iyo martidiisa isagoo xudduuda islaamka kujooga, wuxuu lahaa geesinimo aad ah oo ujeedisa meesha xaqu jiro, waxaa astaantiisu ahayd xishood badan oo diin huwan, waxaan ku arki jirey salaatulleeyl iyo quraan akhris, sidoo kale soonka sunnada ah ayuu dhar-kadhigan jirey Imaamku. markuu gurigiisa joogo wuxuu mashquul ku ahaan jirey daalacashada kutubtiisa kala duwan ee ku safanaa maktabaddiisa khaaska ah. Wuxuu aad utaageeri jirey ardadiisa iyo macaariiftiisa dhibban ama dhaqaalahoodu yar-yahay, wuxuu booqan jirey qur'aanna ku akhriyi jirey kuwa jirran, sidoo kale wuxuu caan ugu ahaa kaalmaynta iyo kawarqabidda gabdhaha Muslimaadka ah ee aan meelna kutiirsanayn. Ugu dambayntii marka aan soo xusuusto Imaam Boqolsoon waxaa maskaxdayda aad ugu soo degdega afar sifo oo uu lahaa waana: Geesinimadiisii, deeqsinimo uusan waxba laharin, codkarnimo saa'id ah iyo tankale oo ah cilmi meel fog gaaray oo Ilaahay ugu deeqay isagoo da'yar.
Waxaan xasuustaa anoo 9 jira oo masaajido dheer dheer u aaday muxaadaro. Markaas uu bixinaayo muxaadarada dawladu way raadinaysay. Fadlan qofkii og xiritaankuu soo maray iyo suu ku dhintay soo qor.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Boqolsoon&oldid=186293"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga badelay 20:36, 15 Nofeembar 2018.